Jwxo-shiil oo Qoysas Dhulbahante ah Dacdaw ay ku Oogeen Dib Loo Dhigay – Rasaasa News
May 10, 2010 Dacdaw ay ku Oogeen, Dib Loo Dhigay, Jwxo-shiil, oo Qoysas Dhulbahante ah
Warar naga soo gaadhay dalka Ingriiska ayaa sheegay in Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil], ay dacdaw ku soo oogeen qoysas dhulbahante ah, ka dib kolkii ay lugaha la soo gashay rag dhalinyaro ah oo lagga qabtay Qabridahare oo la xidhay lana la,a yahay meel la geeyey.
Dhalinyaro ka tagtay dalalka Maraykanka, Ingriiska iyo Sweden oo isugu jiray Ogaden iyo dhulbahante oo shan nin ahaa, ayaa waxaa lagga qabtay miyiga gabalka Qoraxey, waxaana loo dhiibay ciidamada Itobiya.
Dhalinyaradan oo kolkii dambe la geeyey magaalada Harar, halkaas oo lagu xidhay, markii dambena loo wareejiyey meel aan la aqoon, qaar ka mid ahaa dhaliyaradaas oo la sii daayey ayaa sheegay in ay qabateen rag sheegtay Jabhada ONLF, balse la shaqeeya ciidamada Itobiya, kuwaas oo u gacan galiyey ciidanka Itobiya.
Nimankaas oo kolkii dambe tagay dalka Sweden ayaa xaqiijiyey in rag u adeega Jwxo-shiil oo ku xidhan Itobiyanka ay shirqooleen.
Hadaba, eheladii ragaas la la,a yahay ayaa waxay xog fiican ku heleen in uu gacan xoog leh ku leeyhay Jwxo-shiil, arintaas. Waalidku iyaga oo arintaas daba taagan ayey dacwad ka fureen qareen iyaga oo geeyey cadaymo iyo markhaatiba.
Sida ay wararku sheegayaan, waxaa arinka dhex galay odayaal ka socda beesha dhulbahante oo ku guulaystay in ay hakiyaan dacwada. Waxaa socda wadahadal hoose, waxaana la sheegay in qoysaska dhulbahante lagu qancinayo dacwada dib ha loo dhigo inta laga ogaanayo wiilsha xaalkoodu waxa uu ku sugan yahay. Arintan ayaa dhacday laba todobaad ka hore, isla maalmihii uu tagay dalka Ingriiska.
Jwxo-shiil, ayaa waxaa aad ula socdaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya in ay la shaqeeyaan rag Itobiya ku xidhan oo muddo dheer shaqadaas ku jiray. Hada ayaa waxaad moodaa in ay ragaasi dhibaato u gaysteen qaar ka mid ah beelaha Somaliyeed ee aan degin Ogadeeniya, kolkii ay ka daaleen ummada Somalida Ogadeeniya.
Jwxo-shiil, oo loo haysto dambiyo badan oo uu ka galay ummada Somaliyeed gaar ahaana ummada Ogaden, ayey suurto gal tahay in uu xabsi galo oo ku dhamaysto noloshiisa inta ka dhiman.
Waxaa intaas dheer in loo haysto 74 ruux oo isugu jira ajnabi iyo dad degaanka ah.